रेखाले हारिन् किस बाजी! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सरकारद्धारा उर्जा संकटकालको घोषणा
पाकिस्तान विश्वकपको सेमिफाइनलमा →
काठमाण्डौ, चैत्र । भर्खरै मात्र सम्पन्न नेफ्टा अवार्डमा नायिका रेखा थापाले सर्वोत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड हात पारिन। अवार्ड हातपारे पनि रेखाको मन खुसी देखिएन। कारण उनले अवार्ड हात पार्नु भनेको एक निर्देशकलाई किस गर्नु थियो।अर्थात उनले निर्देशक सुरेशदर्पण पोखरेलसँग आफूले किस गर्ने बाजी राखेकी थिईन्। अवार्ड जितेपछि रेखाले किस बाजी हारिन् र सुरेशलाई किस गर्नुपर्ने भएपछि रेखा दुःखी भएकी हुन्। चुलबुले नायिका रेखाले ‘किस’ बाजी कसरी हारिन् त? पक्कै पनि चासोको विषय बन्न सक्छ। कुरा थियो अवार्ड हुनुभन्दा एकदिन अगाडिको। निर्देशक दर्पणले सपनामा रेखाले अवार्ड पाएको देखेछन् र रेखालाई भनेछन्, ”मैले सपनामा तपाईंले अवार्ड पाएको देखें। मेरो सपना प्राय पूरा हुन्छ त्यसैले तपाईंले अवार्ड पक्कै पाउनु हुन्छ।” तर रेखाले सुरेशको कुरामा विश्वास गरिनन् र उनले सर्त राखिन्, ”यदि मैले अवार्ड पाएँ भने तपाईंलाई किस गर्छु। तर अवार्ड पाईन भने त्यही समारोहमा किस गर्ने गालामा सबैको अगाडि थप्पड हान्छु। मञ्जुर छ?” सुरेश पनि के कम? आए आँप गए झटारो भने झैं जिते रेखाको किस नजिते एक थप्पड न हो! सुरेशले रेखाको प्रस्ताव स्वीकारे रे। भोलिपल्ट अवार्ड बितरण गरियो र रेखाले सर्वोत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड हात पारिन् र सुरेशसँग किस बाजी हारिन्।
किस बाजी जितेपछि सुरेश निकै खुसी भए सो समारोहमा। तर रेखाले आफूले गरेको बाचा भने अहिलेसम्म पनि पूरा गरेकी छैनन्। रेखाले किस नगरेपछि सुरेशले फेसबुकको स्टाटसमा पनि सो कुरालाई अप्रत्यक्ष रुपमा लेखेका थिए। अहिले सुरेशको प्रोफाइल तस्बीर पनि किस गरेको नै छ। उनको सो तस्बीरमा एक जना केटीले एक केटालाई किस गरेको दृश्य छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि सुरेशले रेखालाई आफ्नो बाचा पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।